၂၁ ကြိမ်မြောက် ဥရောပရုပ်ရှင်ပွဲတော် - Screening Times - Myanmar Network
၂၁ ကြိမ်မြောက် ဥရောပရုပ်ရှင်ပွဲတော် - Screening Times
Posted by Myanmar Network on October 2, 2012 at 14:00 in ပြည်တွင်းသတင်းများ
၂၁ ကြိမ်မြောက်ဥရောပရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကို အောက်တိုဘာလ ၄ ရက်မှ ၁၄ ရက်အထိ ရန်ကုန်မြို့၊ ဆူးလေဘုရားလမ်းရှိ နေပြည်တော်ရုပ်ရှင်ရုံတွင် ကျင်းပသွားပါမည်။
ယခုနှစ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကို ဂျာမနီသံရုံးမှ ဦးဆောင်ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်ရှိ ဥရောပသမဂ္ဂမအဖွဲ့ဝင် နှင့် ဥရောပ ကောင်စီဝင်နိုင်ငံဖြစ်သော ဗြိတိန်၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီ နှင့် ဆွစ်ဇာလန် နိုင်ငံများမှ ရုပ်ရှင်ကား နှစ်ကားစီ၊ ဖင်လန် နှင့် နော်ဝေး တို့မှ ရုပ်ရှင်ကား တစ်ကားစီ စုစုပေါင်း ၁၀ ကားကို ၃ နာရီခွဲ နှင့် ၆ နာရီခွဲ တို့တွင် ပြသပါမည် ဖြစ်ပါသည်။ ရုပ်ရှင်ပြပွဲကို အောက်တိုဘာ ၄ ရက်နေ့တွင် ဂျာမန် ရုပ်ရှင်ကားဖြင့် ညနေ ၆ နာရီခွဲတွင် စတင်မည်ဖြစ်ပြီး အောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ပြင်သစ်ရုပ်ရှင်ကားဖြင့် ၃ နာရီခွဲတွင် ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ရုပ်ရှင်ကားအားလုံးသည် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ၏ဘာသာစကား ပြောဆိုပြီး အင်္ဂလိပ်စာတန်း ပါမည် ဖြစ်ပါသည်။
အထူးသတိပြုရန် - ယခင်နှစ်များကဲ့သို့ဖိတ်စာပါရှိရန် မလိုအပ်ပါ။ ရုပ်ရှင်လက်မှတ်များကိုပွဲမစမီ ၁၅ မိနစ်အထိ ဦးရာလူစနစ်ဖြင့်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
Thursday 4th October: Opening
Almanya – Welcome in Germany
Die Herbstzeitlosen (Late Bloomers)
Das System (The System)
Sunday 14th October: Closing
ဗြိတိသျှရုပ်ရှင်ကားများ၊ ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာများ၊ ရုပ်ရှင်နှင့်ပတ်သက်၍ ဗြိတိသျှကောင်စီ၏ဆောင်ရွက်ချက်များ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်များအကြောင်းကို ထပ်မံသိရှိလိုပါက http://film.britishcouncil.org တွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ဤ၀က်ဘ်ဆိုဒ်ကို ကြည့်ရှုလေ့လာခြင်းဖြင့် ယနေ့ခေတ်ဗြိတိသျှရုပ်ရှင်အဆင့်အတန်း၊ တီထွင်ဖန်တီးမှုများ ကို တကမ္ဘာလုံးရှိ ပရိသတ် များသိရှိနားလည်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။
ယူကေ တွင်ကျင်းပသောရုပ်ရှင်ပွဲတော်များအကြောင်းကိုသိရှိလိုပါက အောက်တွင်ဖော်ပြထား ၀က်ဘ်ဆိုဒ်များတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
အခြားနာမည်ကျော်ကြားသောရုပ်ရှင်ပွဲတော်များ ကိုလည်း ဤ အောက်ပါ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်များတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Permalink Reply by hwyee2010 on October 2, 2012 at 15:47
Permalink Reply by May Htar Nwe on October 2, 2012 at 16:47
Thank for that information. :) i'm really interested in international movie.
Permalink Reply by Patrick Minn on October 2, 2012 at 17:04
တိုးနိုင်တဲ့သူ ရစတမ်း ဦးရာလူဆို ... မလွယ်တာမို့
ဖုန်းနံပါတ်လေး မေးလ်လိပ်စာလေးနဲ့ မဲဖောက်ပေးမယ်ဆိုလည်း သိပ်ကောင်းမယ်ဗျ
Permalink Reply by Hla Hla Win on October 4, 2012 at 6:19
Thanks for arrangements
Permalink Reply by Kay Zar Naing on October 15, 2012 at 12:41